Garaa lafummafi waan qabani kenuni ummuri kenna ni dheereessa jedhaa sayinsini. - Ethiopia video sharing site
Published: Sep 25, 2017 by Dibabe Hope Newman Filed under: Shashe med - 20 Views
Yeroo namni isini gargartani gammaduu fi yeroo fuulii isani gammachuun ifuu ,yeroo isin galatonfatani , isinile gammachuuni guddani akka isiniti dhagayamuu beekamadhaa. Garuu qorannon ademsifamee tokkoo akka mudhisuuti gammachuu sani qofaa utuu hin tanee , fayyaluman ykn tolaa nama rakkatee oluuni sammuu kennafi fayyaa kenna darbee umurii kenna akka dhereessuu danda’uu irra gahameraa.
Waggotaa kurnani darbani kanin kessati fayyalumafi tolaa oluuni mummee qorannoo adda addaa ta’e tureraa. Qorannon akkaa mudhisuti , Kennuuf tolaa oluuuni wallumman gaalattii si’ayinaa fi fayyaa qaama kennaa kan dabalufii , darbee ummuri dheeraa akka jiranuu akkaa godhuu danda’uu irraa gayammeraa. Qarshi kennuu ykn yeroo offii kenani tajajiluunis bu’ani inni kenuu tokkuma. Yeroo garaa fayyaattiti fudhanee fudhachuu irraa kennuu wayyaa.
Yeroo kennaa namni tokkoo kenuu gammachuuni sammu isaati dhagayamuu “giver’s glow’ ,(gabina ifaa sammuu) jedhama. Yeroo kenninu kemikalii adda adda sammuu kenna kessati faca’aa , kemikaloni kunin fayya kennafi ummuri dheeraa akka qabanuu nuu godhani jechuudhaa.
Isninlee yeroo ammaa ummani kenna buqafamee rakkina irraa jiruu kana gargarsaa kesssani ummataa kennaa , gammachuufi ummuri dheeraa argadhaa jedhaa posti kiyyaa kan adhaa asirati rawwadhaa
Tags: insurance, health, life insurance, car deallership, life, pschology
ስትሮክ እየጨረሰን ነው (መላኩ ብርሃኑ)…………………&he...